အလှူငွေလက်ခံတာ ဘယ်နေ့ထိ နောက်ဆုံးထားပြီး လက်ခံနိုင်ပါသလဲမဆူး။
ခရီးစဉ် အတွက် အများစုသွားနိုင်ရန် ဧပြီလ ၂၆ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့ နောက်ဆုံး ထားပြီး လိုက်ပါသူ စာရင်းနဲ့ စုရပ်မှတ်တိုင်တွေ ညှိနိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူစာရင်းလည်း ဧပြီ ၂၆မှာ ပိတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူစာရင်းကိုတော့ ဧပြီ ၂၉ မှာ ပိတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒရှိသူများ ၂၉ရက် မတိုင်ခင်မှာ အပြီး လာလှူကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဘွားဆူးရေ ၂၉ရက်နေ့ လစာမထုတ်ရလောက်သေးဘူး
ကြိုဆိုပါတယ် ညီမလေး ပန်ပန် ရယ်။
အလှူလည်း လိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါအုန်းနော်။
ပန်းတနော်နဲ့ အဲဒီဆေးရုံကိုရောက်ဖူးခဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ထပ်ပြီး ကြော်ငြာဝင်လိုက်ချင်ပါသေးတယ် … အဲဒီဆေးရုံက မြို့နဲ့ဝေးတဲ့အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကို နယ်ခံရွာသားတွေက လုပ်အားအလှူပေးပြီး ဆောက်ခဲ့ကြတယ် .. မြတောင်ဆရာတော်နဲ့ ဦးပဇင်းများက ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲတဲ့ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ကြတယ် … အဆောက်အဦးမတည်ငွေကို ပန်းတနော်မြို့ပေါ်နဲ့ ပန်းတနော်အသင်း(ရန်ကုန်)က အများဆုံးမတည်ခဲ့ပြီး ဆေးရုံအတွက် လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်း ကုတင် ခေါင်းအုံးကစလို့ သီတဂူဆရာတော်နဲ့တပည့်များက လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ် … ဧပြီလထဲမှာ ဆေးရုံစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ် … နေ့စဉ်ဆေးရုံလည်ပတ်ဖို့ဆိုတာ တော်ရုံငွေကြေးနဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … မတည်ငွေဘယ်လောက်ပဲ များများ လိုအပ်ချက်ဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိနေအုန်းမှာပါ … နှမ်းတစ်စေ့နဲ့ဆီမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် စုပေါင်းလိုက်တော့လဲ ဆီဖြစ်လာတာမို့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ လှူဒါန်းကြစေလိုပါတယ် …
ခရီးစဉ်အနေနဲ့ကတော့ အထူးပြောစရာမလိုလောက်အောင် အပြည့်အစုံစီမံထားပြီးဖြစ်ပါတယ် …
ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ ဘုရားလဲဖူး လိပ်ဥလဲတူးနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်ကို စီစဉ်ပေးထားတာမို့ စီစဉ်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … စေတနာထက်ထက်သန်သန်နဲ့ စီစဉ်ထားတာကို သိထားတာမို့လို့လဲ ဖြစ်နိုင်ရင် လိုက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါသေးတယ် …
မဝေ ပြောသလိုပါပဲ.. ဆေးရုံမှာ လည်ပတ်ဖို့ ဆေးဝါး စရိတ် အလှူခံခြင်း ဖြစ်သည့်အပြင် ရရှိသည့် အလှူငွေ များကိုလည်း ပထမဆုံး အစပျိုးနေချိန် ဖြစ်သည့် အတွက် ငွေပဒေသာပင် အနေနဲ့ မတည် မပေးနိုင်ခဲ့သော်တောင်မှ ထို အလှူငွေဖြင့် ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူရှင်များ အနေနှင့် အလှူ၏ မိမိတို့ လှူဒါန်းလိုက်သော ဆေးဝါး အလှူ၏ အခကြေးငွေကြောင့် လူပေါင်းများစွာ ကျန်းမာရေး အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသည်။ အလှူ သွားသည့် နေ့တွင်တော့ အလှူမလိုက်နိုင်သည့် အလှူရှင်များ အနေနှင့် ခရီးစဉ်ကို အာရုံပြုပြီး ကုသို်လ် စိတ်များ ပွားများနိုင်ကြပါစေ။
အလှူရှင်များလည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။ ကုသိုလ် အကျိုးကို အပြည့်အဝ ခံစားရရှိနိုင်ပါစေ။
ဘဏ်ကနေလွဲလို့ရမလား ၊ လိပ်စာ ပေးလို့ရမလား
ဘဏ်ကနေ ငွေလွဲပေးလို့ ရပါတယ်။
တချို့လည်း ဘဏ်ကနေ ငွေလွဲပေးကြပါတယ်။
ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ အချက်အလက် အတိအကျ ပေးပါမည်။
လိုက်မဲ့သူတွေ စုပေါင်းပြီး ကားငှားသွားတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ။
ကားငှားမယ့် ကုန်ကျစရိပ်ကို အားလုံးစုပေါင်း ထည့်ဝင်ပေါ့။ ဒါဆို
တစ်ဦးတည်းအပေါ်မှာလည်း ဝန်မပိတော့ဘူး။ ပိုပြီးတော့လည်းး
ဖိုရမ်မှာ လိုက်ပါမည့်သူစာရင်းမှာ ရေးထားတာ တွေ့ပါတယ်။
လိုက်ပါမယ့်သူတွေ စုပေါင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ် ထည့်ဝင်စရာ မလိုပါဘူး။
ဖိုရမ်မှာပဲ ကိုအောင်က အဲဒီလိုတခါမေးဖူးလို့ ပြောထားတာလေး ပြန်ကုဒ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုအောင်ရေ-အလှူကို ဝိုင်းဝန်းပူပန်စဉ်းစားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအကြီးကြီး တင်ပါတယ်။
ဒီအလှူကို ဖြစ်မြောက်စေချင်တဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးအတွက် တတပ်တအား အားကိုးအားထားပြုနိုင်မယ့် အခမဲ့ ကုသပေးမယ့် ဆေးရုံကို အောင်မြင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအားထက် စုပေါင်းအားနဲ့ဆိုရင် ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရွာထဲကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ စုပြီး လှူဖြစ်စေချင်တာလည်း ပါပါတယ်။
နောက်ဆုံးကတော့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကို အလည်ခေါ်တဲ့ သဘောပါပဲ။
စုပေါင်းခရီးသွားခြင်းဖြင့် ရွာသူားတွေ အချင်းချင်း ပိုမိုရင်းနှီး ခင်မင်သွားစေနိုင်မယ့်အပြင် ဒေသန္တရ ဗဟုသုလည်း ရနိုင်မယ်။
အားလုံးကို အဆင်ပြေပြေ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကို အလည်ခေါ်တာလည်း ဖြစ်တာမို့ ကိုယ်ကပဲ ကျခံဖို့ စဉ်းစားထားတာပါ။
အဓိက ဦးဆောင်နေတဲ့ ဆူးက တာဝန်ပိမှာကို စိုးရိမ်ပြီး အစစ လိုက်စဉ်းစားစီစဉ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါပဲ
မမက ခရီးသွားကုသိုလ်နဲ့အစားအသောက်ကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက် ရွာသူားအားလုံကို ဖိတ်ကြားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် … အလှူ့ရှင်ရဲ့ စေတနာထက်သန်မှုအတွက် ပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးလိုက်ပါပေးရုံပါပဲ … လူများများလိုက်နိုင်လေ ဝမ်းသာလေလေဖြစ်မယ့်အစီအစဉ်မို့ ကျွန်မတို့လဲ အခုလောက်အထိ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
ကျော်သိန်းမြင့်23 (ကိုရီးယား) က အချိုရည်လှူသလိုမျိုး
အမည်မဖော်လိုပဲ နောက်ကွယ်ကနေ ပံ့ပိုးနေသူတွေရှိတာမို့….
ဝေဝေ ပြောသလို ပျော်ပျော်ပါးပါး အလှူသွားကြဖို့သာ……
(အလှူပြီးလျှင် အလှူခံရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များကို ရှင်းလင်း တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
အစားအသောက်နဲ့ ခရီးစရိတ်အတွက် အလှူငွေ ပါဝင်ထားတဲ့ အလှူရှင်များလည်း ရှိပါတယ်။
အပူအပင် ကင်းစွာဖြင့် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ လိုက်ပါနိုင်ပါတယ်။
စေတနာ ရှေ့ထား မေးမြန်းတဲ့ အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
၁။ ဆေးရုံ အတွက် ဆေးဝါးဒါန (နွမ်းပါးချို့တည့် မကျန်းမာသူ အဆင်ပြေစေဖို့)
၂။ အလှူကို အကြောင်းပြုပြီး ရွာသူရွာသားများ တပျော်တပါး စုပေါင်းကာ ရင်းနှီး ခင်မင်နွေးထွေးစေဖို့ (မမြင်ဖူးသည့် စာပေ မောင်နှမများ တွေ့ဆုံကာ မောင်နှမ အရင်းအချာ သဖွယ် ခင်မင် ရင်းနှီးစေဖို့)
၃။ စုပေါင်းခရီးစဉ် နှင့် ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ ရစေဖို့
၄။ စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွာ လည်ပတ်ပြီး ပျော်ရွင်ကြစေဖို့ (အစားအသောက် ကိစ္စ မပူပင်ရလေအောင်)
၅။ ခရီးစဉ် အတွက် အပူအပင်ကင်းစွာ လိုက်ပါနိုက်ကြစေဖို့ (အလှူနေရာသွားသည့် လမ်းခရီးစဉ်)
စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်တာပါ။
ခရီးစရိတ်ကိုလည်း တချို့သော စေတနာရှင်များက အမည်မဖော်ပဲ လာရောက် လှူဒါန်းသူတွေလည်း ရှိသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ကျသလောက် စရိတ်ကို လိုအပ်သလောက် သတ်မှတ်ချက် မရှိပဲ ထည့်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကားကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် တစီးတည်း စုပေါင်းပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားကြမယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ခရီးစဉ် အားလုံးပြီးဆုံး သွားချိန်မှာတော့ စာရင်းရှင်းတမ်း ထုတ်ပြန်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
လိုက်ပါသူကော မလိုက်နိုင်သူပါ ဖတ်ရှုပြီး မုဒိတာပွား သာဓုခေါ်ဖွယ်ရာ အလှူဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
ဖြစ်အောင်လည်း လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကျိုးမပါ စေတနာ သီးသန့် ဖြူစင်သော အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိစိတ် သဒ္ဒါ စေတနာမှ မိမိအား ပြန်လည် အကျိုးထူးပေးကာ အစစအရာရာ အထစ်အငေါ့မရှိ အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
အားလုံးလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ပျော်ရွင်သော ခရီးစဉ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကိုဆူး ချင့် ..
ရွာသားပီသအောင် ထန်းရည် သောက်မယ် ကြက်တိုက်မယ်…
ကြွေးကြော်နေတဲ့ ကိုရင်ဂီဂီ ကို ထိပ်တုံးနှင့် ခတ်ထားလိုက်ပါချင့် ….
ကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ ထန်းရည်တွေ ဘာတွေ မသောက်ကြနဲ့ပေါ့ဗျာ။
တကယ်လို့ သောက်ခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို လက်တို့ဖြစ်အောင်တို့နော်။ ချန်မထားခဲ့နဲ့နော်။
အလှူငွေ တစ်ယောက် နာမည် စာရင်းတိုးတိုင်း အကူအညီတောင်းတိုင်း ကူညီပေးသည့် Mလုလင် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စေတနာ အကျိုးကို အပြည့်အဝ ရရှိခံစားရပြီး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ။
ဆူး မနက်ဖြန် ခရီးထွက်စရာ ရှိသဖြင့် ဒီရက်ပိုင်းမှာ မမ ကို ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
မမ မှလည်း အလှူရရှိငွေများကို စာရင်းကြေညာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူး ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဆိုင်ကို လာပေးအပ်မည့်သူများလည်း ဆိုင်မှာ လာပေးထားနိုင်ပါတယ်။
အလှူရှင်များ အနေနှင့် မိမိ ပေးအပ်ထားသော အလှူငွေများ ဖိုရမ် စာရင်းတွင် နာမည် မတွေ့ရှိသေးပါကလည်း အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။
အလှူပါဝင်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်း များလည်း အလှူအကျိုးအပြည့်အဝ ခံစားရရှိပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။
ဒေါ်ဆူးရေ ၂၉ ရက်နေ့ကို အတော်လေးနီးကပ်မှပဲ လှူငွေလာပေးပါ့မယ် ခမျာ့…
မလိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်အချိန်မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး
အမတ်မင်း ရေ.. အလှူကို အချိန်နီးရင် လူစာရင်း ပြန်စစ်ပါမယ် သေချာ လိုက်ဖြစ်မဖြစ်.. အဲဒီအချိန်မှာ ထပ်မံ အကြောင်းမကြားရင်တော့ လိုက်ပါ စာရင်းမှာ သေချာပေါက် ကျန်ခဲ့မှာ သေချာပါတယ်။
လေးလေး ဘက်က အလှူခံ ရရှိမှု စာရင်းကိုလည်း ဖိုရမ်မှာ တို့ထားလိုက်နော်..
လေးလေး ငွေလွဲရင် တယောက်စီ တခါနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ် ပေါင်းပြီးသာ စုထားလိုက်ပါ ရန်ကုန် ရောက်မှ စာရင်းချုပ်လိုက်မယ်။
ကိုဘုန်းကျော် ဖတ်နိုင်အောင် ပိုစ့်ကို မန့်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီထဲမှာ ကိုဘုန်းကျော်သိချင်တာတွေ အားလုံးပါနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
အကယ်၍များ ကျန်နေတာတွေ ရှိသေးတယ် ဆိုရင်တော့လည်း
သိချင်တာတွေကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ စုံစမ်း မေးမြန်း စစ်ဆေး နိုင်ပါတယ်။
မမ နဲ့ ဆူး ခင်ဗျာ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း ပါ ခေါ်လာခဲ့ လို့ ရမလား။
သူ့ အတွက်အားလုံး တာဝန်ယူပါတယ်။
အကြံပေးချင်တာတစ်ခုက အလှူရှင်တစ်ဦးက ရေသန့်နဲ့ အချိုရေ အတွက်
အဲဒီ အလှူရှင်ကိုလဲ သာဓု ခေါ် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲဒီ အလှူငွေကို အချို ရည် နဲ့ တခြား လိုအပ်တဲ့ ဥပမာ towel လိုမျိုးပေါ့
တခုခု ထည့် ရင်ကောင်းမလားလို့
ကျွန်တော်က ခရီးအတွက် လိုရာသုံး ၁၀၀၀ဝ နဲ့ ရေသန့် လိုသလောက်
ငွေ ၂၀၀၀ဝ မလှူ ရှင်ရဲ့ ကို ညှိနှိုင်းစေလိုပါတယ်။ လမ်းခရီးအတွက် ပိုပြည့်စုံ
ရေသန့်က ကျွန်တော့အတွက် အခက်အခဲ မရှိ လိုသလောက် ယူလို့ရပါတယ်။
ကျမလည်း မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ဖို့ ခေါ်ထားပါသေးတယ်။
လမ်းခရီးအတွက် ဝိုင်းဝန်းအားဖြည့်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၂၀၀၀ဝ အလှူရှင်ကို မေးပြီး အကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်။
အလှူရက်နီးတဲ့အခါ လူစာရင်း အတိအကျ သိရရင် ခရီးစဉ်အတွက် အသေးစိတ် တိုင်ပင်ကြဖို့လည်း စီစဉ်ထားပါတယ်။
ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကိုလည်း အားလုံးကို အသိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမင်းဇော်ရေ.. ရေသန့် နှင့် ခရီးစရိတ် လှူဒါန်းမယ် ဆိုတာ သိရတဲ့ အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ရေသန့်နှင့် အအေး အလှူငွေ ၂သောင်း ရတဲ့ အတွက် အအေးအတွက် သီးသန့် အားဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ အလှူရှင်လည်း ကျေနပ်မည် ထင်ပါတယ်။
မမ ပြောသလိုပါပဲ.. အလှူ အတွက် အသေးစိတ်ကိုတော့ အနားနီးရင် အားလုံးကို ကြေညာပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။
ဘေးပြော ဘောက်ပြောလေးတွေတော့ ကျိန်းသေရှိမှာဖြစ်ပေမယ့်
မမ တို့၊ ဆူး တို့ ဆိုတာက
ဘာဆို ဘာမှ အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလို့ စိတ်ထဲမှာသေချာနေပါတယ်။
မနေ့ညကမှ ခရီးက ပြန်ရောက်လို့ အင်တာနက်မဖွင့်နိုင်တော့လို့ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အလှူကိစ္စ ဘာထူးလဲ လက်တို့ပြီး သတင်းစုံစမ်းတဲ့ အခါ ဒီပိုစ်အကြောင်း တွင်တွင်ပြောကြလို့ သိချင်စိတ်ဖြစ်သွားမိပါတယ်။
သေချာ သိချင်ရင်တော့ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒီအလှူကို ပထမ စစချင်း ဆန္ဒရှိသူသည် မမ ဖြစ်ပါသည်။
ဆူး နဲ့ မမ စကားပြောမိတဲ့ အခါ ယခု အလှူ ကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အလှူခံပေးပြီး အလှူကို အကြောင်းပြုပြီး အားလုံး တပျော်တပါး ပျော်ပွဲစား ခရီးစဉ် အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်အောင် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ မမ မှ နေ့လည် ထမင်းနှင့် သွားရေး လာရေး တာဝန်ယူပေးထားပါသည်။
ဆူး နှင့် မမ တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ အလှူ အတွက် နေ့နေ့ ညည ဘာလိုမလဲ တွေးတွေးမိနေရင်းမှ အလှူ အတွက် စေတနာတွေ တဖြေးဖြေး ပိုလာခဲ့ကာ.. အိတ်စိုက် ဖို့ အတွက် အတွေးတွေ တဖြေးဖြေး များပြားစွာ စဉ်းစားထားသည်များလည်း ရှိပါသေးသည်။
၁. အလှူ အတွက် အလှူငွေကောက်ခံတယ်။
၂. အလှူ ထွက်ချိန် သည် မနက်စောစော ၆နာရီလောက် စုရပ်ကို ရောက်ရှိရမည် ဖြစ်မည် ဖြစ်တဲ့ အတွက် မနက်စာ စားခဲ့ဖို့ ပြောပေမဲ့ မစားရသေးသူများ ဗိုက်မဆာအောင် အစားအသောက် တခုခု ကျွေးဖို့ (အိတ်စိုက် ကျွေးဖို့ စဉ်းစားထား)
၃. နေ့လည်စာ ထမင်းစားချိန် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျွေးပါမည်။ (အိတ်စိုက် ကျွေးဖို့ စဉ်းစားထား)
၄. ညနေ အပြန်နောက်ကျခဲ့လျှင် ထမင်းစားချိန် ရောက်ခဲ့သော် ခရီးလိုက်ပါသူများ ဗိုက်ဆာပြီး စိတ်မကြည်မလင် ဖြစ်မှာ ကြိုတွေးမိတဲ့ အတွက် ညစာ စားချိန် နီးကပ်သော် ညစာကျွေးဖို့ (အိတ်စိုက် ကျွေးဖို့ စဉ်းစားထား)
၅. အလှူသို့ ကားဖြင့် တူတူသွားကြမည် ဖြစ်ပြီး လိုက်ပါချင်သူများ ကားခ စရိတ် အတွက် စိတ်မညစ်စေရအောင် အခမဲ့ လိုက်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။
လိုက်ပါသူ လူဦးရေ များလာတဲ့ အတွက် ကားကြီး ဈေးစုံစမ်းတဲ့ အခါ အဲကွန်း လေအိတ်ကားကြီး ၁နေ့တာ အတွက် ၄၅ယောက်စီးကို ရသိန်း မှ ၃သိန်းခွဲ အနည်းဆုံး ပြောနေကြပါတယ်။
အလှူ အတွက် သောက်ရေ မုန့် အအေးနှင့် စားစရိတ်အမျိုးမျိုး ကို အကုန်ကျခံပေးမည့် မမ အတွက် ဝန်မပိုရလေအောင် ဆူး ရဲ့ စိတ်ကူးတခု အနေနှင့် ကားကြီး ငှားတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင် စဉ်းစားထားတာ တခု ရှိပါတယ်။
ကားများဖြင့် လိုက်ပါကူညီပေးနိုင်သူများ ဆက်သွယ်ပါလို့ ရိုးရှင်းစွာ ရေးထားပါတယ်။
ကားဖြင့် လိုက်ပါ မောင်းနှင့်ဖို့ စေတနာ ရှိသူအဖို့
ကားမောင်းပြီး လူအပင်ပန်းမခံပါနှင့် ကားအပျက်လည်း မခံပါနှင့် ဆီဖိုးကျသင့်သလောက်သာ ခရီးစရိတ်လှူဖို့ အလှူခံထားပါတယ်။
အကယ်၍သာ ကားစရိတ် တယောက်ကို ၁သောင်းခွဲကျပါတယ် ၂သောင်းကျပါတယ် ဆိုပြီး ကောက်ခဲ့လျှင်လည်း လိုက်ပါသူများ ထည့်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူး နှင့် မမ ၏ ကိုယ်ချင်းစာသော အတွေးဖြစ်ပါသည်။ သာမာန် လခစား ဝန်ထမ်းတယောက် အနေနှင့် အလှူကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါသည် မိမိ ချွေးနင်းစာဖြင့် စားစရိတ် သောက်စရိတ်မှ ဖဲ့ကာ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အလှူ ကို လိုက်ပါချင်ခဲ့သော် ကားခ ဆိုတော့ အဆီးအတားသည် ထို လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အား စောင့်ကြိုနေခဲ့သော် သူများတွေ တပျော်တပါး သွားနိုင်ပေမဲ့ ဒို့တော့ ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းကာ စိတမကောင်း မဖြစ်ရလေအောင်.. မည်သူကိုမှ ခရီးစရိတ် အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် မပေးပါဘူး။
လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ လိုက်ပါနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဆင်ကြီး က သစ်လုံး ဆွဲနိုင်လို့ သစ်ဆွဲပါတယ်။
မြင်း က လှည်းဆွဲနိုင်လို့ လှည်းဆွဲပါတယ်။
ထို့ အတူ လူတွေလည်း ကိုယ့်ဝန် ကိုယ်အား ကိုယ် အသိဆုံးပါပဲ။
မနိုင်တဲ့ လူတွေ မထမ်းရလေအောင် နိုင်လောက်တဲ့ လူသာ နိုင်သလောက် ထမ်းစေဖို့ ဆူး က တိုက်တွန်းပြီး ပျော်ရွင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ခရီးစဉ် တခု ဖြစ်အောင် စီစဉ်နေပါတယ်။
ကားခ အတွက် လုံးဝ စိတ်မပူကြပါနှင့် အားလုံးကို ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်။
အလှူအတွက် အချိုရည်နှင့် အအေး လာလှူတဲ့ လူလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် လည်း ဘာလှူရမလဲ မေးတဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အလှူရှင်များ အနေနှင့် မိမိတို့၏ ချွေးနင်းစာများကို မိမိတတ်နိုင်သလောက် စေတနာ ရှိသလောက် လှူဒါန်းမှု အားလုံးကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ မိမိတို့ လှူဒါန်းထားသော ငွေကြေးများသည်လည်း ဆေးရုံသို့ တန်ဖိုးတိကျစွာ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး တခြား ကုန်ကျစရိတ်များ လှူဒါန်းငွေ ရှိခဲ့သော် ပိုလျှံခဲ့လျှင် ပိုငွေ အဖြစ် ဆေးရုံကိုသာ ထပ်မံ လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မရှိလို့ မလှူ…. မလှူလို့ မရှိ။ မဟုတ်တော့ပါဘူး..
မလုပ်လျှင် မဖြစ်.. လုပ်ရင်တော့ ဖြစ်ရပါမည်။
ပြိုင်တူ တွန်းရင် ရွေ့ပါတယ်။
တဖက်တည်းက ပြိုင်တူ တွန်းတာများခဲ့လျှင် ဆန့်ကျင်ဖက်မှ လာပြိုင်တွန်းသူ သည် လည်းလွယ်ကူစွာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
ဆူး နှင့် မမ တို့၏ သီတဂူ သုမေဓာ ဆေးရုံ ဆေးဝါး ဒါန အလှူ အတွက် စိတ်အား ထက်သန်စွာဖြင့် အလှူကို ပါဝင်နိုင်ကြပါစေသောဝ်။
အလှူပါဝင်ချင်သူများကိုလည်း ဒီနေရာမှနေပြီး ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အနည်းအများ ပမာဏသည် အဓိက မကျပါဘူး။ စေတနာသည်သာလျှင် အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
မဆူးရေ အဲဒါဆို ရေသန့် အတွက်ကျွန်တော် တာဝန်ယူလိုက်ပြီနော်။
ခရီးစရိတ် (အနည်းဆုံး ၁၀၀၀ဝ )ကိုတော့ သင်္ကြန် ပြီး ရန်ကုန် ပြန်ရောက်
မှပဲ လာလှူ တော့ မယ်နော်။ March 28 မှာ ကျွန်တော် စစ်ကိုင်း ပြန်ရ အမှာ
မို့ပါ။ MG ရွာသူား အားလုံး အတာသင်္ကြန်မှာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းစွာဖြင့်
ကို မင်းဇော် ရေ … အလှူငွေတုန်းက ကျွန်တော် လာယူမလို့ဟာ … လမ်းမသင့်တာနဲ့ နောက်တစ်ရက် မှသွားယူမယ် မှန်းတာ …. အဲ့နေ့ မနက် အန်တီ မမ က သွားမယူနဲ့တော့ ရပြီးပြီ ဆိုလို့ … :-) သာဓုပါဗျာ … သာဓု…သာဓု ..
ကိုမင်းဇော် ရေ.. သောက်ရေ အတွက် မပူအပင်ပဲ တာဝန် အပြီး လွဲထားလိုက်တော့မယ်နော်။
အနားနီးလို့ စုရပ် ကြေညာပေးပါမယ်။
အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါစေ။
ဟုတ်ကဲ့ Mလုလင် ရေ။ အကိုနဲ့ ကျွန်တော် မဆုံဖြစ်လိုက်ဘူးဗျာ။
ကျွန်တော်ကလဲ ဟိုဆို ဒီရောက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ လမ်းကြုံတုန်း
မဆူး ဆီ ဝင်လှူလိုက်ယ်ဗျာ။ Mလုင် လဲ အလုပ်ရှုပ် သက်သာ အောင်ပေါ့။
မဆူး ရေသန့်ကိစ္စ ကို လုံးဝ မပူပါနဲ့ ။ ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်။
ပထမ ရေသန့်အလှူရှင်ထံမှလည်း မင်းဇော်ထံမှ ရေလှူလျှင် သူ့အလှူငွေကို လိုအပ်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ပြောလာပါသည်။
စိတ်ထားပြည့်ဝစွာဖြင့် ဝိုင်းဝန်းကြသော အလှူရှင်များအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
သင်္ကြန်မှာ ရွာသူားတွေ ရေပက်ဖို့ ရေသန့်ဗူးကြီးတွေ တာဝန်ယူပေး မလားဟင်…။ ရိုးရိုးရေနဲ့ ပက်ချင်ဂျဘူးတဲ့… ကူညီပါဂျာ…။
မနောက်ပါနဲ့ အောင်ကြူးရတယ်.. အလှူမှာ များများ ထည့်ဖို့သာ စဉ်းစားပါ..
ကိုပေါက်ထံတွင် မန်းလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှ သူများ၏ကောင်းမူ့
ဆူးရေ…မနက်ဖန် ငွေလွှဲစရာရှိလို့ အလှူအတွက် ငွေလွှဲပို့ချင်ပါတယ်…ဒါကြောင့် လာရောက်ထုတ်ယူမဲ့သူရဲ့ မပုတင် နံပါတ်နဲ့နံမည်လေးကို ကျနော်ရဲ့ မေးလ်ပို့ထားပေးပါဗျာ…ငွေလွှဲပြီးရင် ထုတ်ယူရမယ့် လိပ်စာကို မေးလ်ထဲပြန်ပို့ပေးထားပါ့မယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ ကိုယ်တိုင်မလိုက်နိုင်သေး တဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်၊နောက် အစီအစဉ်တွေမှာ တိုက်ဆိုင်ရင်တော့လိုက်နိုင်မှာပါ။အလွန်နွေးထွေးပြီးပျော်စရာကောင်းမယ့် ခရီးစဉ်ပါပဲဗျာ…
အီးမေး ပြန်ပို့ထားပါတယ် ဆရာရေ..
ဆူး ဆီမှာ ဒီနေ့ မနက်တပိုင်းလုံး မီးကလည်းပျက် အင်တာနက် ပျက်နေလို့ ဖြေကြားချက် နှောင့်နှေးသွားခြင်းကို စိတ်မရှိပါနဲ့နော်။
ခုရက်ထဲမှာ မီးပျက်တာရော ကွန်မကောင်းတာရောကြောင့်
ဆူးလည်း ကိုဇော်မင်း မေးထားတာကို မသိသေးဘူးထင်ပါတယ်။
ကိုဇော်မင်းရဲ့ ဖုံးနံပါတ်လည်း မသိလို့ ပြန်ဆက်မပေးနိုင်တာမို့…
ဖြစ်နိုင်ရင် ပေးထားတဲ့ ဖုံးနံပါတ်တွေကို ဆက်သွယ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မနက်မှာပဲ ရွာထဲက စာဖတ်သူစာရေးသူ မဟုတ်ပဲနဲ့ အပြင်ကနေ သတင်းကြားပြီး လှူချင်စိတ်နဲ့ လာလှူတဲ့ အလှူငွေကို လက်ခံရရှိခဲ့တာမို့လို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ် …
ဦးကျော်ညွှန့် + ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်မှ အလှူငွေ သုံးသောင်းကျပ် လှူဒါန်းသွားပါတယ် …
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ဆိုရင်း ……
ကူညီပေးတဲ့ မဝေ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ဆူး ဆီမှာ အင်တာနက် ပျက်ခဲ့လျှင် မဝေ ကဲ့သို့ တယောက် မဟုတ် တယောက် ကို အကူအညီတောင်းပြီး တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူငွေ စာရင်းတက်တာနဲ့ မကြာမှီ ဖိုရမ်မှာ မြင်နိုင်စေရန် ကြိုးစားနေပါတယ်။
အများကြီး စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမို့.. နောက်များ အလှူမှသာ ကြုံကြိုက်ရင် လိုက်ခဲ့နော်။
ဘဏ်နာမည် ဘာလဲဟင်.. ပြောပြပေးထားအုန်း။ ဒီက ငွေလွဲ ထုတ်တဲ့ မြို့နယ် ပြောပေးမယ်။
ရွာစားကျော်က အမှာတော်ပါးထားပါကြောင်း လူကြုံနှင့်လှုပါမည်တဲ့ခင်ဗျာ။
အလှူရှင် များ အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ လိုက်ပါချင်သူတွေကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
လိုက်ပါ ချင်သူများ ကား ငှားတာ အဆင်ပြေတယ်။ ကား ကိစ္စ စိတ်အေးရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သင်္ကြန်ပြီးမှ အချက်အလက်လေးတွေကို သေချာ ထုတ်ပြန်ပါမည်။
ကိုဇော်မင်းရေ.. အလှူငွေ စာရင်းတက်နေပြီနော်။
သဂျီး ဆာဗာ အရမ်းမလေး ရလေအောင် Edit နဲ့ အောက်ဆုံး တခုမှာ ပြင်ထားတာမို့… သတိမထားမိမှာ စိုးလို့ သတင်းပေးတာနော်။
၈-၄-၂၀၁၂ မှာ ကျရောက်တဲ့ သားတော်မောင်လေးရဲ့ သုံးနှစ်ပြည့် မွေနေ့အလှူ အဖြစ် မန္တလေးဂေဇတ်က သီတဂူ သုမေဓာ ဆေးရုံကြီးဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မေလ (၁)ရက်နေ့မှာ စုပေါင်းအလှူလုပ်မယ့်ပွဲမှာ ကုသိုလ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
သားလေး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ဆန္ဒနှင့်ဘဝထပ်တူကျပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ်..
ကိုရွာစားရဲ့သားတော်မောင်လေး ဘဝလမ်းခရီးမှာ ” တ”စရာမလိုအောင်ပြည့်စုံသော
ကိုရွာစားကျော် ရဲ့ ချစ်လှစွာသော သားတော်လေး လည်း ကျန်းမာ သက်ရှည် ပညာစွမ်းထက် ဉာဏ်ရည်ထက် ပြုံးရွင်ပျော်မြူး မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သားကောင်း ရတနာ ဖြစ်ပါစေ။
ရွာသားကျော် တို့ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ဆန္ဒနဲ့ ဘဝ တထပ်တည်း ကျပါစေ။
မဆူးရေ….. လေးပေါက်ကို 9.4.2012 နေ့မှာလွှဲပေးထားတယ်နော့်…….
မောင်ရှမ်းတို့လဲ…. ခရီးစဉ်ကမသေချာသေးဘူး…… မေဒေးကိုမှီမယ်ထင်တယ်….
အလှူငွေကိုလည်း ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။
အလှူငွေ စာရင်းကိုတော့ ဖိုရမ်မှာ လေးပေါက် စာရင်းမှာ တိုးပေးပါလိမ့်မယ်နော်။
ကျနော့် သားတော်မောင်အတွက် အမှတ်တရ ဆုတောင်းပေးတဲ့ လေးပေါက်နဲ့ မဆူးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
အလှူကိုလည်းလိုက်ချင်သေးတယ်.. အမျိုးသမီးကိုရော သားကိုရောခေါ်ခဲ့မလား စိတ်ကူးနေတာ..
နှစ်ယောက်စလုံးက ဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ ခွင့်ကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ စဉ်းစားနေရလို့..
ကိုရွာစားကျော် နဲ့ မိန်းမ ပါ လိုက်ချင်လည်း စီစဉ်ပေးပါမယ်နော်။
ကြိုးစားပါ။ ပျော်ရွင်တဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်မှာပါ။
အစ်မဆူးရေ … အဲ့ဒီနေ့ ပြန်ရောက်မယ့် အချိန်က …ခုနှစ်နာရီလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ …. လိုက်ဖြစ်မယ် မထင်တော့ဘူး …6နာရီ ဝန်းကျင်လောက်ပြန်ရောက်လျှင်တောင် ညှိပြီးလိုက်ဦးမလို့ …. အဲ့ထက်ပိုနောက်ကျမယ်ဆိုတော့ … မလိုက်ဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ် … ။ ညနေပိုင်း အလုပ်ရှိသေးတာကြောင့်လေ … ၊ ချိန်းထားတာတွေလည်း … နောက်ကျကုန်မှာမို့ပါ …. ။ နောက်မှ သူများတွေ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကြည့်ပြီးပဲ သာဓုခေါ်တော့မယ်နော်…. ။
ဆူး တို့ နောက်ကျရင် ညစာကျွေးဖို့ပါ စီစဉ်နေတဲ့ အတွက် ရန်ကုန် အဝင် ည၆နာရီ ကျော်မှာ သေချာ သလောက်ရှိပါတယ်။
၆နာရီ နဲ့ ရနာရီ ၁နာရီပဲ ကွာတာမို့ အဆင်ပြေအောင် ညှိကြည့်လိုက်ပေါ့။
ညှိလို့ ခက်မယ်ဆိုရင်တော့ ညီမ အဆင်ပြေသလိုသာ လုပ်ပါရပါတယ်။
ခရီးစဉ် အတွက်တော့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ပါမှာမို့ စိတ်ချ လက်ချ ကို စောင့်နေပါ သေချာပေါက် လှလှပပ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ကား သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး သွားနိုင်မယ့် ခရီးစဉ်လေးပါ ….
ပျော်စရာ တခြား အစီအစဉ်လေးတွေလဲပါအုန်းမှာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် အတူလိုက်ပါစေချင်ပါတယ် …
ဟုတ်ကဲ့..ဆူးမမရေ…စရင်းကိုတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာ..အများအတွက်ကုသိုလ်ရအောင် ဆောင်ရွက်ကြတဲ့သူတွေအားကို သာဓု ခေါ်ပါတယ်ဗျာ…ဒီတစ်ခါတော့ အလှူငွေနဲ့ပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်ပါတယ်…အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ကြုံအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲ အလှူများမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းထားပါတယ်ဗျာ…။
***၈-၄-၂၀၁၂ မှာ ကျရောက်တဲ့ သားတော်မောင်လေးရဲ့ သုံးနှစ်ပြည့် မွေနေ့အလှူအဖြစ်
ပါဝင်လှူဒါန်းတဲ့ ရွာစားကျော်၊ မဒမ်ရွာစားကျော်၊ ဂျူနီယာရွာစားကျော် မိသားစုများ အားလုံး
အနာမဲ့သူ သျှင်ပါကူ ကဲ့သို့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဘေးရောဂါ အနာကင်း၍
စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ချမ်းသာစွာဖြင့် ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာ အဖြာဖြာ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေကြောင်း……….. ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။
မိသားစုများအားလုံး အလှူမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်ပါလှူဒါန်းနိုင်ကြဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
**** အားတက်သရော အလှူငွေထည့်ဝင်လှူဒါန်းတဲ့ မောင်ရှမ်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေဒေးအမှီ ခရီးစဉ်လည်း ဆွဲနိုင်ပါစေ။
ရန်ကုန်ကို ညနေ ၆နာရီအရောက် ပြန်ဝင်ဖို့ဆိုရင် လောနေရမှာ စိုးတာရယ်၊ နယ်ဝေးသမားတွေ (ရန်ကုန်က မဟုတ်တဲ့သူတွေ) အတွက် ပြန်ရောက်မှ ညစာအတွက် စီစဉ်ရရင် အဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။
zaw mina&ဒီတခါတော့ အလှူငွေနဲ့ပဲ ဖြေသိမ့်လိုက်ရပေမယ့်…
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ပါစေလို့ ကျမတို့တတွေကလည်း ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးအတွက် အားဖြည့်လှူဒါန်းပေးတဲ့အတွက်
သင်္ကြန်တွင်းမှာ အလှူ အတွက် ဖုန်းဆက်စုံစမ်းထားတဲ့ သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ပြီးမှ အလှူငွေ ပြန်လည် လက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ပြီးမှ ဆက်လက် လှုပ်ရှားကြမယ်။
အလှူ အတွက် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ သတင်းတခု ရှိပါတယ်။
ဘဝတပါးပြောင်းသွားသော ဖခင်ကြီး ဦးစိန်ဝမ် အား ရည်မှန်းပြီး ဆေးရုံ အတွက် ဝှီးချဲ ဘီးတပ် ကုလားထိုင် တခု အလှူခံရထားပါတယ်။
ကာလတန်ဖိုး သေချာ မသိပေမဲ့ မကျန်းမာတဲ့ လူတွေ သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်စေဖို့ အတွက် အကျိုးများတဲ့ ပစ္စည်းတခု ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
အားလုံး ဝမ်းသာ စေဖို့ အတွက် အသိပေးပါတယ်။
ဘဝတပါးပြောင်းသွားသော ဖခင်ကြီး ဦးစိန်ဝမ် လည်း သူ့အပိုင် ပစ္စည်းကို လှူတာ သိရှိပြီး ရောက်ရာ ဘုံဘဝမှနေပြီး အလှူကို သိရှိပြီး သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေ။
အရီးလတ်က အလှူ ငွေ လာ လှူသွားပါတယ်။
အရီးလတ် မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန် တိုတောင်းတဲ့ အတွက် ရွာသူ ရွာသားများကို တွေ့ဆုံပြီး မိတ်ဆက်ချင်ပေမဲ့ ပြည်တော် ပြန်ရောက်လာတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ တခြား ကိစ္စ များ ရှိသေးတဲ့ အတွက် ကိုယ်တိုင် မနှုတ်ဆက်နိုင်တဲ့ အကြောင်း အားလုံးကို သတိရ လွမ်းဆွတ်ပြီး သတိရနေကြောင်း တွေ့ချင်နေတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခိုင်းထားပါတယ်။
အရီးလတ် ကိုယ်စား ပြောခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်လည်း.. ခုတလော လူကောင်သာကိုယ်တိုင်မရောက်တာ….
အရီးလတ်သမီးရော မပါဘူးလား…။ ကြောင်ကြီးဗူးဂျင်လို့…။
အရီးလတ် က သူ့ ခင်ပွန်း နဲ့ တူတူ လာတာ..
မုန့်ဝယ်ခဲ့ ….မပါရင် မခေါ်တော့ဘူး…
အရီးလတ် ယပ်တောင် လက်ဆောင်ပါတယ်။